China tungsten mmanya Manufacturer na Supplier | Huacheng
tungsten eruba mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
tungsten alloy efere
tungsten ọla kọpa alloy
tungsten alloy mmanya ihe onwunwe
tungsten alloy ekara akụkụ
elu okpomọkụ molybdenum alloy ebu ihe
molybdenum alloy efere
molybdenum Idupu mandrel
Tungsten bụ a na-abụghị ferrous metal, bụkwa otu ihe dị mkpa usoro metal, tungsten ore n'oge ochie a maara dị ka "oké nkume" .1781 site Swedish mmiri ọgwụ Karl.William.Scheelite chọpụtara na a ọhụrụ elemental acid, tungstic acid, e amịpụtara . na 1783, tungsten na-amịpụtara si tungsten nkwụnye ego chọpụtara site na Spaniard DE purya. N'otu afọ, tungsten powder e nwetara maka oge mbụ site carbon Mbelata tungsten trioxide, na mmewere na aha ya bụ. Ọdịnaya nke tungsten na ụwa jikọrọ ọnụ bụ 0,001%. Iri abụọ dị iche iche nke tungsten minerals a chọpụtara. Tungsten ego na-na-ejikọta ya na ọrụ nke granitic magma. Mgbe n'oké tungsten bụ silver ọcha onwunwu metal,-agbaze ebe dị nnọọ elu, nnọọ ike ...
FOB Price: Quote dị ka agbasokarị ahịa
Min.Order ibu: MOQ adabere kpọmkwem ngwaahịa nkọwa
Tungsten mmanya / warara / mkpanaka
Tungsten bụ a na-abụghị ferrous metal, bụkwa otu ihe dị mkpa usoro metal, tungsten ore n'oge ochie a maara dị ka "oké nkume" .1781 site Swedish mmiri ọgwụ Karl.William.Scheelite chọpụtara na a ọhụrụ elemental acid, tungstic acid, e amịpụtara . na 1783, tungsten na-amịpụtara si tungsten nkwụnye ego chọpụtara site na Spaniard DE purya. N'otu afọ, tungsten powder e nwetara maka oge mbụ site carbon Mbelata tungsten trioxide, na mmewere na aha ya bụ. Ọdịnaya nke tungsten na ụwa jikọrọ ọnụ bụ 0,001%. Iri abụọ dị iche iche nke tungsten minerals a chọpụtara. Tungsten ego na-na-ejikọta ya na ọrụ nke granitic magma. Mgbe n'oké tungsten bụ silver ọcha onwunwu metal,-agbaze ebe dị nnọọ elu, nnọọ ike. Atomic nọmba 74. Steel isi awọ ma ọ bụ ọlaọcha na-acha ọcha, elu ekweghị ekwe, elu agbaze mgbe, n'okpuru ikuku ozize na ụlọ okpomọkụ, isi nzube bụ Nlụpụta filament na elu-ọsọ ọnwụ alloy ígwè, superhard anwụ, na-eji na ngwa anya ngwá, chemical ngwá. Tungsten mkpanaka mmasị n'ime waya, ike ga-eji dị ka a bọlb, tube na ndị ọzọ n'ime filament.
Mgbe ugbo elu-abịarute n'elu lekwasịrị, ọ ngwa ngwa tụlee ya mgbọ. Modern munitions abụghị otu dị ka tupu, na mgbọ eji arọ explosives, dị ka tomahawk akụ ụta na 450 n'arọ nke TNT, elu na-agbawa agbawa. Modern warplanes adịghị ebu ihe na-agbawa agbawa. Ọ na-agbanwe ụzọ a echiche ọhụrụ na-abia zaa. Kama iji ot mgbọ, ha dobe a metal mkpanaka mere nke tungsten, a na-akpọ a tungsten mkpara. Site karị nke iri puku kwuru iri ma ọ bụ ọtụtụ narị kilomita, a osisi nwere ike ama esịn na a ezigbo ọsọ, ezuru imi a mbibi ma ọ bụ ụgbọelu ụgbọelu, tinyekwara a ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọelu. N'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ na a elu ogo ziri ezi, dị nnọọ ngwa ngwa ọsọ.
Previous: tungsten ọla kọpa alloy
Next: tungsten alloy ekara akụkụ
Industrial ịta mpaghara, Yuduo obodo, Jiangyan, Jiangsu, China.
© Copyright - 2017-2019: All Rights echekwabara. Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile